တရုတ်ရုပ်သံမှာ ပြသွားပြီး နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ရှေးမြန်မာ့လှပျိုဖြူများရဲ့ ရွှေစွန်ညို တေးသရုပ်ဖော် – itpoekar,Co.th
September 10, 2019 November 3, 2019 by itpoekar,co.th
တရုတ်ရုပ်သံမှာ ပြသွားပြီး နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ရှေးမြန်မာ့လှပျိုဖြူများရဲ့ ရွှေစွန်ညို တေးသရုပ်ဖော်
“ရွှေစွန်ညို..ဘာကိုလိုလို့ ..ဝဲတယ်….မထွေးလိုလို့ ..ဝဲပါတယ်…မထွေးမပါ …ဒို့ချည်းသာ…ပါပါလျက်သား..နောက်ကထား…မထွေးအသားခါးလှတယ်…
ချောင်းငယ်ရေနဲ့ ဆေးပါ့မယ်..ချောင်းငယ်ရေချမ်း နွေမှာခမ်း….”
ဆိုတဲ့ ရွှေစွန်ညိုသီချင်းလေးကို သားချော့တေးလေး အဖြစ် ပရိသတ်ကြီးတို့ ငယ်ငယ်က နားဆင်ပြီး အိပ်ခဲ့ကြဖူးမှာပါ….မေမေဆိုပြခဲ့တဲ့ ရွှေစွန်ညိုသီချင်းလေးထဲက မထွေးလေးကို စားဖို့ ဖမ်းတဲ့ ရွှေစွန်ညိုကြီးကိုလည်း ပရိသတ်တို့ ကြောက်ခဲ့ကြမှာပါ…
အဲဒီလို နာမည်ကျော် ရွှေစွန်ညို သီချင်းလေးကို ခုခါမှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုမှာ ပြသခဲ့ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်..…..
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု သရုပ်သကန်တွေကို နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ တကူးတက ပြသလောက်ရအောင် ရွှေစွန်ညို သီချင်းက ဘာတွေများထူးဆန်းပါသလဲ….မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါပဲ…. ရွှေစွန်ညိုသီချင်းဟာ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ငယ်ငယ်က နားထောင်ဖူးခဲ့ကြတဲ့ သီချင်းဖြစ်ခြင်း… အဲဒီသီချင်းကိုမှ ရှေးခေတ် လှပျိုဖြူလေးများရဲ့ တေးသရုပ်ဖော်မှုက ဆွဲဆောင်မှုရှိခြင်း…..ယနေ့ခေတ်လောက် ခေတ်မီမှုမရှိသေးတဲ့ အရင်ခေတ်မှာတောင် လှပျိုဖြူများရဲ့ အလှတရားဟာ အနောက်တိုင်းသူများအောက် မလျော့ဘဲ ကျက်သရေရှိ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ မြန်မာမိန်းမပျိုဟန်ပန်ကို ပြသနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဒီသီချင်းကို ခုလို တင်ဆက်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ကျနော်ပြောတာ မယုံရင် အောက်ကဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ…. ပရိသတ်ကြီးတို့သာ ၁၉၆၀-၇၀ မှာ မွေးဖွားခဲ့သူဆိုရင် ငယ်ဘဝကိုလွမ်းဆွတ်တမ်းတမိမှာ ဖြစ်သလို 90s 20s တွေဆိုရင်လည်း ရှေးမြန်မာမိန်းမပျိုလေးများရဲ့ ယနေ့ခေတ်နဲ့ မတူ ကျက်သရေရှိစွာ လှပတဲ့ အလှတရားတွေကိုလည်း လေ့လာခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…ကဲ…ညွှန်းနေတာနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး ကိုယ်တိုင်သာ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်….
Writer – HW #shwelight.com Video Source : Knowledge, Funny And Feelings
Posted in NewsTagged သတင္းမ်ား
Previous ကျောင်းသားများအတွက် သိန်း(၈၅၀၀)ထိ ထောက်ပံ့ပြီးခဲ့တဲ့ ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်း
Next ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ငယ်စဉ်ကထိန်းခဲ့ဖူးသည့် လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင်အဖိုးဦးကျော်ညွန့်